Waa adagtahay in Finland lagu noolaado iyadoo aan la heysan ogolaanshaha degitaanka - Asylum in Finland
Megangelo-doone ahaan waxaa kaliya oo aad xaq u leedahay in aad joogto Finland adigoo aan heysan fiiso ama ogolaanshaha degitaanka illaa iyo inta aad codsigaada megangelyada ka heleyso go’aan.
Tusaale ahaan inta aad sugeyso go’aanka, xuquuqdaada shaqo-sameyn waa xaddidan tahay. Megangelyo-doone ahaan waxaad Finland ka shaqeyn kartaa saddex ama lix bilood kaddib marka aad codsatay megangelyada.
Xadku waa saddex bilood, haddii aad saraakiisha tustay baasaboor ama dukumenti kale oo safar oo shaqeynaya markii aad sameynaysay codsiga megangelyada.
Xadku waa lix bilood, haddii aadan soo bandhigin dukumenti safar.
Xuquuqdaada shaqo-sameyn waxey shaqeyneysaa illaa iyo inta uu ka dhaqangelayo go’aanka laga gaaray codsigaada megangelyo.
Haddii aad codsigaada megangelyada ka hesho go’aan ogolaansho ah, waxaad heleysaa ogolaansha degitaanka oo ay markasta ku jirto xuquuqda shaqo-sameynta.
Haddii aad codsigaada megangelyada ka hesho go’aan diidmo ah, aadna sii joogto Finland waxaad dalka ku joogtaa sharci darro. Markaasna xaq uma lihid in aad shaqeyso ama waxbarato. Qoyskaadu kama codsan karo Finland ogolaanshaha degitaanka halkan oo aad deggan tahay darteed.
Haddii aad Finland joogto adigoo aan heysan ogolaanshaha degitaanka, xaq uma lihid ammaanka bulshada, ceymisyada ama inta badan adeegyada caafimaadka dadweynaha. Ma heli kartid aqoonsiga qofka ee Finnishka, taas oo adkeynaysa qabsashada arrimo badan. Aqoonsiga qofka waxaad u baahan tahay tusaale ahaan marka aad arrimo ka fushaneyso hay’adaha, bangiyada iyo isbitaalada, Dadka dalka ku joogo sharci darrada waxey u dhowdahay in ay noqdaan tusaale ahaan dhibbanayaasha ka ganacsiga dadka.
Ku sii aqri ingiriis: Working in Finland
Sii aqri: Ku jooga Finland ogolaansho degitaan la’aan
codsiga megangelyda ogolaansha degitaanka qoys dhaqaalaha nolosha shaqo